J147 powder yakatanga kugadzirwa mu2011, uye vatsvakurudzi vakaita zvidzidzo zvakawanda zvinoratidza kuti zvinogona kuchinja kukanganwa kwekurangarira uye kunonoka kana kushandura kuAlzheimer mumakonzo. Asi kusvikira ichi chidzidzo, vakanga vasingazivi kuti zvakashanda sei mumasero. Vakakwanisa kuratidza kuti pfupa reJ147 rinoshanda nekushandisa ATP, puroteni mu mitochondria uye nemuviri wesimba rine simba. Apo J147 powder yakanga iripo, neuroni dzakadzivirirwa kubva kune zvinokonzerwa neutano. Zvimwe zviongorori zvakaratidza kuti J147 powder inowedzera mazinga eAAT uye inosimudzira mitechondria yakagwinya, yakasimba